Ogaden News Agency (ONA) – Israa’iil oo Xasuuqday Shacab Falastiiniyiin Ah.
Israa’iil oo Xasuuqday Shacab Falastiiniyiin Ah.
Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in ciidammada Israel ay dileen 15 qof oo dibadbax ka dhigayay xadka israel, halka kun qof oo kalena ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi. Madaxweynaha Falastiniyiinta ayaa dowladda Israel ku eedeeyay in ay mas’uul ka yihiin dhimashada dadkani.
Milateriga Israel waxaa ay dhankooda shegeen in dadkani ay dhagxaan iyo walxaha qarxa ay ku soo tuurayeen milateriga, waxaana ay shegeen in ay kaga jawaabeen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaas. Falastiiniyiinta Qasa ayaa iyagoo kumanaan qof ah socod banaan bax ah ugu dhaqaaqay xadka Israel oo ay ku bilaabayaan mudaharaado lix todobaad socon doona.
Milatariga Israel-na waxa uu ku waramay in ay rabshado ka socdaan lix goobood waxaanu sheegay in ay rasaas ku rideen kuwa rabshadaha horseedka u ah. Falastiiniyiintu waxay iskugu uruureen oo fadhiisimo ka dhigteen shan goobood oo u dhaw xadka.
Dibadbaxyada Qasa ka bilowday ayaa bilow u ah wax Falastiniyiintu ay ugu yeedheen todobaadyo banaanbax ah oo ay ku dalbanaayaan in qaxootiga Falastiniyiinta loo ogolaado inay ku laabtaan guryahooda oo hada ah Israel. Golaha amaanka ee Qaramada midoobay ayaa la sheegay in ay yeelan doonaan kulan looga hadlayo xaaladda ka soo cusboonaatay Qasa.